Dharka tolnimo leh
Madadaalada hal-abuurka ah ee dharka naqshadeynta dharka
Dib u dhiska dharka ayaa sidoo kale la dhihi karaa waa naqshadda labaad ee dharka dharka. Waxay loola jeedaa waxqabadka labaad ee maryaha dhammaaday iyadoo loo eegayo naqshadeynta loo baahan yahay inay soo saarto saameyn farshaxan cusub Waa kordhinta fikirka naqshadeeyaha waana ikhtiraac aan la barbardhigi karin. Waxay sameysaa ...
Waxyaabaha loo yaqaan 'synthetic'
1. chiffon Baraf macmal ah lagama heli karo dharka dharka xagaaga, oo ka samaysan maadada fiber-ka kiimikada, waa giraangirta alaabta ceeriin. Chiffon maro duuduub-u adkaysi u leh dharka, iyo jirka sare wuxuu leeyahay xarrago, xarig dabiici ah, qabow iyo dareen qabow, sida loo xirto sida wanaagsan ee muuqata. Laakiin chiff ...
Wax dabiici ah oo daahir ah
1. Dharka linenka ah Gogosha dharka, looma baahna in la sheego, waa dharka xagaaga. Waxay u oggolaaneysaa maqaarka inuu neefsado, laakiin sidoo kale neefsasho badan kuma siineyso dhidid cufan, dhibaato koronto oo aan taagnayn, sidoo kale u jilicsan taabashada, dadka xasaasiyadda leh ayaa si gaar ah saaxiibtinimo leh. Intaa waxaa dheer, dharka laftiisa waa mid aad u ...
Qolka 13A03, Dhismaha Ganacsiga Guoda Chain, NO173 Shuiyuan Street, Degmada Xinhua, Shijiazhuang, Hebie, Shiinaha